Google Stadia hadda waa laga heli karaa dukaanka Play-ka, laakiin wali ma aad qulquli kartid cayaaraha. - KU SAMEEYSAA NABADA
ACCUEIL » TECH & TELECOM Google Stadia hadda waa laga heli karaa dukaanka Play-ka, laakiin wali ma aad qulquli kartid cayaaraha.
Google wuxuu kaaga baahan yahay inaad ku ciyaarto cayaaraha tayada sare leh ee qalabka aad iska leedahay. Tani waa fikradda Google Stadia, oo ah adeeg baahinaysa ciyaarta qalabkaaga, maxaa yeelay adeegayaasha Google ayaa maareeya dhammaan daweynta lagama maarmaanka ah. Waxaad wali u baahan doontaa inaad iibsato ciyaaro si gooni gooni ah, laakiin waxay noqon kartaa adeegga ciyaarta daruuriga ah oo runtii awoodi kara.
Stadia diyaar uma ahan inay ku wareejiso cayaarahaan aaladahaaga Android, laakiin hadaad rabto inaad madax ku bilowdo, barnaamijka Stadia waa la heli karaa ka dukaanka Play .
App-ku wuxuu noqon doonaa habka kuugu muhiimsan ee aad la macaamili karto adeegga, iyadoo aan loo eegin qalabka aad isticmaaleyso. Codsigu wuxuu kuu oggolaanayaa inaad iibsato cayaar, maareyso xisaabtaada Stadia iyo maamulayaashaada, oo aad bilowdid fadhiyada ciyaarta.
Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad ku cayaarto Stadia kahor Nofeembar 19, goorta adeegga la bilaabayo, laakiin dalabka Android si buuxda uma waafaqsana. hadda waxtar lahayn. Waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameysato akoonkaaga Stadia, illaa iyo inta aad ka heysato koodh casuumaad ah oo ka yimid aasaasayaasha Stadia ama xirmada Koowaad Edition, ama Buddy Pass oo aad ka heshay saaxiib.
Source Image: ] Google
Liiska Store Store wuxuu daaha ka qaadaa qaababka kale ee barnaamijka, oo ay ku jiraan tab tab oo muujinaya cayaarahaaga badhamada ciyaarta ee dusha sare, iyo tab sahanka oo soo bandhigaya farriimaha bulshada. . Is dhexgalka YouTube, Reddit, Twitter, Facebook iyo Discord ayaa sidoo kale ku jira arjiga.
Waxa xiisaha leh ee ku saabsan app-ka ayaa ah in laga dhex dhisay Flutter, oo leh Google SDK cusub taas oo u oggolaanaysa horumariyeyaasha inay abuuraan codsiyada aalado badan isla waqti isku mid ah, taas oo macnaheedu yahay in dalabka iPhone ay u badan tahay inuu u ekaan doono nooca Android. Si kastaba ha noqotee, app laguma rakibi karo Chromebook waqtiga xaadirka ah, sababtoo ah Google ayaa hor joogsanaysa.
Markii la bilaabay Stadia, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku ciyaarto ciyaaro taleefannada Pixel, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad hesho koodh galal ah. Codsiga Android ee Stadia, waa kan la heli karo on Play Store halka nooca iPhone-ka laga heli doono wixii lagu soo dejiyo App Store isla marka Apple uu ogolaado.
Source source: Google
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://bgr.com/2019/11/07/google-stadia-android-app-ready-for-download-ahead-of-service-launch/